Soosaarayaasha Diski Harrow iyo Warshad - Shiinaha Soosaarayaasha Cajaladda Harrow
Faahfaahinta alaabada taxanaha 1BQX Light-duty Disc Harrow waxay ku habboon yihiin xoqidda iyo furfurista xinjiraha ka dib markii la falo iyo qorshaynta dhulka ka hor inta aan lagu beerin dhulka la beeray. Mashiinnada ayaa ka dhigi kara carro iyo bacrimin isku dhafan, oo iska fogeeya jiridda dhirta ee ku taal carrada fudud ama dhexdhexaadka ah iyo diyaarinta sariir abuur si loo beero. Musalsalka 'Light-duty Disc Harrow frame' wuxuu ka samaysan yahay tuubbo bir ah oo aqoon leh, Qaab dhismeedkoodu waa mid fudud oo macquul ah, xoog leh oo waara, ku habboon in la shaqeeyo, fududahay in ...
Faahfaahinta badeecada 1BJX harrow disc dhexdhexaad ah ayaa ku habboon burburin iyo dabacsanaanta carrada ka dib markii la beero iyo diyaarinta dhulka ka hor abuurka. Waxay ku qasan kartaa carrada iyo bacriminta dhulka la beeray oo ay ka saari kartaa jirridda dhirta. Badeecadu waxay leedahay qaab dhismeed macquul ah, xoog qaadis xoog leh, adkeysi, howl fudud, dayactir fudud, waxayna si wax ku ool ah u burburin kartaa ugana wadi kartaa carrada si dhulku u noqdo mid siman, kuwani waxay la kulmaan baahiyaha beeraha degdegga ah. Waxyaabaha ku jira saxanka waa 6 ...